Misokatra ho an'ny dia iraisam-pirenena i Malawi
Home » etn » Misokatra ho an'ny dia iraisam-pirenena i Malawi
Ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Kamuzu any Malawi dia nisokatra ho an'ny fifamoivoizana an'habakabaka ara-barotra hatramin'ny 1 septambra 2020. Vitsy ny sidina voafetra ihany no navela hiasa tamin'ny voalohany tamin'ny 5 septambra.
Ny mpandeha rehetra tonga ao amin'ny Repoblikan'i Malawi dia takiana amin'ny famoahana mari-pahaizana fanandramana SARS Cov-2 PCR ratsy alaina ao anatin'ny 10 andro alohan'ny nahatongavany tany Malawi. Izay mpandeha tsy manana izany taratasy fanamarinana izany dia holavina tsy hiditra.
Ny mpandeha tonga dia takiana ihany koa handroso amin'ny quarantine mandritra ny 14 andro mandritra ny fotoana izay hanarahan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana azy ireo.
Ny mpandeha dia mety takiana amin'ny fanomezana santionany amin'ny fizahana COVID-19. Hangona ao amin'ny seranam-piaramanidina ny santionany ary hampitaina amin'ireo voakasik'izany ao anatin'ny 48 ora ny valin'ny fitsapana. Izay mpandeha misy soritr'aretina dia horaisina araka ny torolàlana manokana napetraky ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana.
Ireo mpandeha dia tsy maintsy mameno sy mandefa Forms Surveillance Travel (TSF) izay hasiana fiaramanidina an-tsambo na amin'ny tranoben'ny terminal. Hatolotra ny mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny tranoben'ny terminal ireo taratasy.
Ny mpandeha sy ny mpanome serivisy rehetra dia takiana mba hanaraka ny fombafomba fanaraha-maso aretina toy ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny fanasana tanana sy ny fanadiovana ary ny fanaovana saron-tarehy rehefa ilaina izany. Hamarina ihany koa ny maripanan'ny vatana amin'ny teboka stratejika isan-karazany.
Ny olom-pirenena amerikana te-hangataka fanitarana visa na fanitarana fahazoan-dàlana ho an'ny mponina dia afaka mitsidika ny birao fifindra-monina Malawi akaiky indrindra hangataka. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho ny tranokala Immigration Malawi: https://www.immigration.gov.mw/
Inona no andrasana
Tsy misy ny ora tsy azo sakanana ary tsy misy ferana ny fitsangantsanganana na fitsangantsanganana eo anelanelany. Ny safidin'ny fitateram-bahoaka dia voafetra be any Malawi. Ireo miasa dia minibus kely fananan'olon-tsotra, taxi-be mitaingina, ary taxi-bisikileta. Minibus dia antenaina hametra ny mpandeha ary mila fampiasana sarontava ary fanalavirana fiaraha-monina.
Festivals, hetsika ara-panatanjahantena ary hetsika lehibe hafa misy olona mihoatra ny 10 dia voarara miaraka amin'ny fanavahana amin'ny fotoam-pivavahana sy fandevenana. Ireo serivisy roa farany dia mety misy mpanatrika 50 raha toa ka misy olona manaraka ny fetran'ny halaviran'ny fiaraha-monina sy ny fepetra fidiovana.
Nakatona ny toeram-pivarotana sakafo haingana, trano fisakafoanana ary toerana fisakafoanana ampahibemaso afa-tsy ny serivisy fakana entana. Ny Governemanta Malawi koa dia nametraka lalàna izay manery ny fanaovana sarontava endrika amin'ny toerana rehetra ho an'ny daholobe, ary izay tsy manaraka ireo torolàlana ireo dia mety hiatrika lamandy. Misy lamandy 10,000 MWK (13 $ US) raha misy tsy manatanteraka ny lalàna mifehy ny governemanta Malawi momba ny fameperana ny fahasarotana ara-tsosialy sy ny fanaovana masker-tarehy tsy maintsy atao.
Any Malawi, misy 5,576 19 tranga voamarina fa COVID-3,420 manerana ny firenena miaraka amin'ireo marary 175 sitrana ary 1 ny fahafatesan'izy ireo hatramin'ny 2020 septambra XNUMX. Ny governemanta Malawi dia nametraka fepetra hamerana ny fihanaky ny viriosy.
Miaina ny fomba fanaovan-tsonia an'i St. Regis San Francisco avy ao an-trano
Tale jeneralin'ny Delta Air Lines: Tsy misy volom-borona an-tsitrapo any Etazonia
47 minitra lasa izay